नेपाल आज | संकटका बेला मन्त्री नै कमाउधन्दामा लागे ( भिडियोसहित)
संकटका बेला मन्त्री नै कमाउधन्दामा लागे ( भिडियोसहित)
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य १५ प्रतिशतले घटेको छ तर नेपालमा प्रति लिटर २ रुपैयाँ घटाइएको छ । नेपाल आयल निगमले स्वचालित प्रणाली अनुसार इन्धनको मूल्य निर्धारण हुने भनेको कहाँ लागू भयो ? यो बदमासी होइन ? यो कालोबजारी होइन ?
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवम पूर्व अर्थराज्यमन्त्री उदयशम्शेर राणा सरकारले खुलेआम औपचारिक ढंगले नै कालोबजारी गरेको आरोप लगाउँछन् । कोरोना संक्रमणको त्रासले नेपाली अर्थ बजार नै अस्तव्यस्त भएकाबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन गरेर राहत दिन छोडेर निगम र सरकारका मन्त्री आफै कमाउधन्दामा लागेको उनको आरोप छ ।
नेता राणासंग भएको संवादका महत्वपूर्ण अंश यस्ता छन् :
क ) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा अलिकति पनि नैतिकता छ भने तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ । कोरोना संक्रमणको त्रासले मुलुक ‘लक डाउन’ मा रहेका बेला प्रधानमन्त्री कुर्सीमा झुण्डिएर बस्न मिल्दैन । उनी सक्रिय हुनुपर्छ ।
ख ) सरकारमा विषम परिस्थितिलाई झेल्ने क्षमता देखिएन । हरेक क्षेत्रका पूर्वाधार कमजोर भएकाले कोरोना संक्रमणबाट जोगिन जनता आफै सचेत र सतर्क हुनुपर्छ ।
ग ) टेकू अस्पताल बाहेक देशभर कुनैपनि ठाउँमा कोरोना परीक्षण गर्ने सुविधा छैन । सरकारले ठूला कुरा गरेर हुन्छ ?
घ ) सरकारको ‘लक डाउन’ को निर्णय उचित छ । यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ । अझ यो निर्णय सरकारले निकै ढिलो गर्यो ।
ङ ) कोरोना संक्रमणले प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले दिनुपर्ने सुविधा, सहुलित र राहत दिनुपर्छ । मुख्यतः बैंकको ऋण, किस्ता बुझाउने म्याद र दरमा सोच्न जरुरी छ ।
च) कोरोनाबाट भगवान पशुपतिनाथले जोगाउँछन भनेर लापरवाही गर्नु हुँदैन । पशुपतिनाथको प्रार्थना गरौं तर सचेतन आफूले कडाइपूर्वक पालना गरौं ।
छ ) शंका लागेमा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न अल्छी नगरौं । मास्क प्रयोग र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिउँ ।
ज ) अहिलेको सरकार अर्थात नेकपाले संघीयता चलाउन सकेन । संघीयता चलाउन नचाहेको पनि हुनसक्छ । राजपा र समाजवादी पार्टीमा संघीयता चलाउने क्षमता नै देखिएन । उनीहरुका गतिविधिले संघीयता धरापमा पर्दैछ ।
झ ) आगामी चुनावमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याउँछ ।
ज ) कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा नेतृत्व छान्दा सबै प्रतिनिधिले विचार पुर्याउन जरुरी छ । पार्टी र देश हाँक्न सक्ने नेता खोजौं । अहिलेको केन्द्रीय समिति भित्र र बाहिर सक्षम नेता जति पनि छन् ।
झ ) आउने महाधिवेशनमा म केन्द्रीय सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गर्छु । जित्नेमा ढुक्क छु ।